ယောငျးလေးတို့အတှကျ မသိမဖွဈဥပဒေ(၆)ခု - For her Myanmar
အခုခတျေမှာမိနျးကလေးတှကေ ယောကျကျြားလေးတှနေဲ့ တနျးတူအခှငျ့အရေးရပမေဲ့လဲ ပါးစပျသရမျးတာတို့၊ကိုယျထိလကျရောကျစျောကားတာတှကွေုံတှနေ့ရေပါသေးတယျ။
ဒီလို အခွအေနကွေုံတှရေ့ပွီဆိုရငျမိနျးကလေးအမြားစုက ရှကျပွီး မပွောရဲတာတှေ၊လငျမယားအဆငျမပွဖွေဈနတောတှကေို ပတျဝနျးကငျြကို မတိုငျပငျရဲတာတှဖွေဈတကျကွပါတယျ။
လိုငျးကားစီးနတေုနျး ကိုယျထိလကျရောကျစျောကားခံရရငျ ပတျဝနျးကငျြကို အကူညီတောငျးပါ။အသံကယျြကယျြနဲ့ တဈခွားသူတှသေိအောငျ အျောပွောပါ။စျောကားခံရတာကိုရှကျပွီးငွိမျမနပေါနဲ့နျော။ဥပဒနေဲ့အတိုငျးလုပျဆောငျလို့လဲရပါတယျ။
(၁)ပါးစပျသရမျးတာတှေ၊ယောငျးတို့မနှဈသကျတဲ့အပွုအမူ၊အပွောအဆို တှကေ ယောငျးတို့ရဲ့ဂုဏျသိက်ခာကိုထိခိုကျတယျဆိုရငျ ပွဈမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (ရာဇသတျကွီး) ပုဒျမ (၅၀၉) အရ တရားရုံးသို့လြှောကျထားနိုငျပါတယျနျော။
(၂)ယောငျးတို့ရဲ့မတျောမရျောကို ရညျရှယျပွီးထိတာတှေ၊ကိုငျတာတှအေတှကျဆိုရငျ ကို ပုဒျမ ၃၅၄ နဲ့ ထောငျဒဏျနှဈနှဈ ကအြောငျလုပျလို့ရပါတယျ။
(၃)လငျမယားဖွဈတာတောငျ ယောငျးလေးတို့ကို လကျနဲ့ရိုကျရငျ ပုဒျမ ၃၂၃ ထောငျဒဏျ (၁)နှဈ ၊တုတျနဲ့ရိုကျရငျ ၃၂၄ ထောငျဒဏျ(၃)နှဈ ၊ ရိုကျပွီးကနျရငျ ပုဒျမ ၃၂၅အရ ထောငျဒဏျ(၂)နှဈ ၊ ဘေးဖွဈစသေောလကျနကျ အပွငျးအထနျထိခိုကျစအေောငျရိုကျရငျ ပုဒျမ ၃၂၆ နဲ့ထောငျဒဏျ နှဈ(၂၀ )ကအြောငျတရားစှဲနိုငျပါတယျ။
Related Article>>>>ခြုပျခယျြတဲ့ မိဘတှဆေီက ဘယျလို ရုနျးထှကျမလဲ?
(၄)ယောငျးလေးတို့အိမျက သမီးကညာ အခါမလငျ့စနေဲ့ဆိုပွီးယောကျြားအတငျးပေးစားရငျ ၃၇၆ နဲ့ ထောငျဒဏျနှဈ (၂၀) ကစြနေိုငျပါတယျ။
(၅)မိနျးမရှိလကျြနဲ့နောကျမိနျးမထားတာတှေ၊အပြျောမိနျးမထားတာတှေ အတှကျ ပုဒျမ ၁၃ ဖွငျ့ ထောငျဒဏျ (၇)နှဈကစြနေိုငျပါတယျ။
(၆) ဆကျသှယျရေးဥပဒဖွေဈတဲ့ ပုဒျမ ၆၆ တော့ ယောငျးလေးတို့နဲ့မစိမျးဘူးထငျပါတယျနျော
ပုဒျမ၆၆(က) ကတော့ facebook /gmail ကို ခိုးယူခွငျးရငျတရားစှဲလို့ရပါတယျ။ ပုဒျမ၆၆(ခ)ကဆကျသှယျရေးကှနျယကျကိုထိခိုကျစရေနျ ဗိုငျးရပျဈ၊
အခွားနညျး နဲ့ ဝငျရောကျစခွေငျး ဆိုရငျ ပွဈမှုမွောကျပါတယျနျော။
ပုဒျမ ၆၆ (ဂ) ကတော့ ဆကျသှယျရေးကိုအသုံးပွုပွီးငှကွေေးနဲ့ ပစ်စညျးတှခေိုးယူခွငျး၊လိမျလညျခွငျး၊အလှဲသုံးစားလုပျခွငျး တှကေ ပွဈမှုမွောကျနိုငျပါတယျ။
ပုဒျမ၆၆(ဃ)ကတော့ ဆကျသှယျရေးကှနျယကျကိုသုံးပွီးလူတဈယောကျကိုခွောကျလှနျ့ခွငျး၊ အနိုငျအထကျပွုခွငျး၊မတရားတားဆီးကနျ့ကှတျခွငျး အသရဖေကျြခွငျး၊ နှောကျယှကျခွငျး၊ခွိမျးခွောကျခွငျး
ယောငျးလေးတို့ရေ မိနျးကလေးတှဘေကျက ကာကှယျရမဲ့ ဥပဒလေေးတှေ အနညျးငယျသိလောကျပွီထငျပါတယျ။မသိသေးတဲ့ ယောငျးလေးတို့သူငယျခငျြးတှကေို ပွနျဝမြှေပေးဖို့လဲ မမပေ့ါနဲ့နျော
Reference Link>>> မောငျပံသုမွလှော , ဥပဒရေေးရာသုတအဖွာဖွာ
အခုခေတ်မှာမိန်းကလေးတွေက ယောက်ကျာ်းလေးတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရပေမဲ့လဲ ပါးစပ်သရမ်းတာတို့၊ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတာတွေကြုံတွေ့နေရပါသေးတယ်။
ဒီလို အခြေအနေကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်မိန်းကလေးအများစုက ရှက်ပြီး မပြောရဲတာတွေ၊လင်မယားအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ကို မတိုင်ပင်ရဲတာတွေဖြစ်တက်ကြပါတယ်။
လိုင်းကားစီးနေတုန်း ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခံရရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူညီတောင်းပါ။အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ တစ်ခြားသူတွေသိအောင် အော်ပြောပါ။စော်ကားခံရတာကိုရှက်ပြီးငြိမ်မနေပါနဲ့နော်။ဥပဒေနဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်လို့လဲရပါတယ်။
(၁)ပါးစပ်သရမ်းတာတွေ၊ယောင်းတို့မနှစ်သက်တဲ့အပြုအမူ၊အပြောအဆို တွေက ယောင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ရာဇသတ်ကြီး) ပုဒ်မ (၅၀၉) အရ တရားရုံးသို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။
(၂)ယောင်းတို့ရဲ့မတော်မရော်ကို ရည်ရွယ်ပြီးထိတာတွေ၊ကိုင်တာတွေအတွက်ဆိုရင် ကို ပုဒ်မ ၃၅၄ နဲ့ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ကျအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
(၃)လင်မယားဖြစ်တာတောင် ယောင်းလေးတို့ကို လက်နဲ့ရိုက်ရင် ပုဒ်မ ၃၂၃ ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ် ၊တုတ်နဲ့ရိုက်ရင် ၃၂၄ ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် ၊ ရိုက်ပြီးကန်ရင် ပုဒ်မ ၃၂၅အရ ထောင်ဒဏ်(၂)နှစ် ၊ ဘေးဖြစ်စေသောလက်နက် အပြင်းအထန်ထိခိုက်စေအောင်ရိုက်ရင် ပုဒ်မ ၃၂၆ နဲ့ထောင်ဒဏ် နှစ်(၂၀ )ကျအောင်တရားစွဲနိုင်ပါတယ်။
Related Article>>>>ချုပ်ချယ်တဲ့ မိဘတွေဆီက ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲ?
(၄)ယောင်းလေးတို့အိမ်က သမီးကညာ အခါမလင့်စေနဲ့ဆိုပြီးယောက်ျားအတင်းပေးစားရင် ၃၇၆ နဲ့ ထောင်ဒဏ်နှစ် (၂၀) ကျစေနိုင်ပါတယ်။
(၅)မိန်းမရှိလျက်နဲ့နောက်မိန်းမထားတာတွေ၊အပျော်မိန်းမထားတာတွေ အတွက် ပုဒ်မ ၁၃ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၇)နှစ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
(၆) ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဖြစ်တဲ့ ပုဒ်မ ၆၆ တော့ ယောင်းလေးတို့နဲ့မစိမ်းဘူးထင်ပါတယ်နော်
ပုဒ်မ၆၆(က) ကတော့ facebook /gmail ကို ခိုးယူခြင်းရင်တရားစွဲလို့ရပါတယ်။ ပုဒ်မ၆၆(ခ)ကဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုထိခိုက်စေရန် ဗိုင်းရပ်စ်၊
အခြားနည်း နဲ့ ဝင်ရောက်စေခြင်း ဆိုရင် ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်နော်။
ပုဒ်မ ၆၆ (ဂ) ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးနဲ့ ပစ္စည်းတွေခိုးယူခြင်း၊လိမ်လည်ခြင်း၊အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း တွေက ပြစ်မှုမြောက်နိုင်ပါတယ်။
ပုဒ်မ၆၆(ဃ)ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံးပြီးလူတစ်ယောက်ကိုခြောက်လှန့်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊မတရားတားဆီးကန့်ကွတ်ခြင်း အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်း
ယောင်းလေးတို့ရေ မိန်းကလေးတွေဘက်က ကာကွယ်ရမဲ့ ဥပဒေလေးတွေ အနည်းငယ်သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။မသိသေးတဲ့ ယောင်းလေးတို့သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ဝေမျှပေးဖို့လဲ မမေ့ပါနဲ့နော်
Reference Link>>> မောင်ပံသုမြေလွှာ , ဥပဒေရေးရာသုတအဖြာဖြာ
Tags: ၆၆ယ, Bus, Facebook, girl, law, shy, woman, ပုဒ်မ